Dowlada Soomaaliya oo heshiis cusub la saxiixatay Shirkadda Albayrak | Jowhar Somali news Leader
Home News Dowlada Soomaaliya oo heshiis cusub la saxiixatay Shirkadda Albayrak
Dowlada Soomaaliya oo heshiis cusub la saxiixatay Shirkadda Albayrak
Dowladda Soomaliya iyo Shirkadda Albayrak ee Maamusha Dekadda Muqdisho ayaa maanta heshiis cusub ku kala saxiixday magaalada Istanbul ee wadanka Turkiga.
Heshiiskan ayaa waxaa dhinaca dowladda u saxiixay Sii-hayaha Wasiirka Dekadaha iyo Gaadiidka Badda Maryan Aweys Jaamac waxaana goob joog ka ahaa Sii hayaha Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo u mahadceliyay labada dhinac.
Heshiiskan oo dib u eegis ku socday muddo ku dhow labo sanno ayaa si wadajir ah la isugu af gartay wuxuuna dhigayaa in shirkada loo cusbooneysiiyo maamulida dekeda, taa bedelkeedna ay horumarin iyo balaarin ku sameyso.
Dhanka kale Turkiga waxaa u saxiixay Mr. Ahmet Albayrak oo ah milkiilaha shirkadda Albayrak, waxaana la filayaa in heshiiskan si rasmi ah maalmaha soo socda ay labada dhinac ku wada saxiixaan magaalada Muqdisho.
Heshiiskii hore u dhexeeyay dowlada Soomaaliya iyo shirkada maamusha dekeda Muqdisho ayaa waxaa cabasho ka keenay shaqaalaha Soomaalida ee ka howlgala dekedda.
heshiiska dowlada Soomaaliya iyo shirkad turki ah